Darpan Nepal – यो टिप्स प्रयोग गर्नुहोस तपाईकि श्रीमतिको शकां गर्ने बानी बिकास हुदैन जानकारी लिनुहोस .
यो टिप्स प्रयोग गर्नुहोस तपाईकि श्रीमतिको शकां गर्ने बानी बिकास हुदैन जानकारी लिनुहोस .
Apr 07, 2018adminIntresting fact0Like
मेरो विवाह भएको पाँच वर्ष भयो । हाम्रो १७ महिने एउटा छोरा छ । म हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा छु । बिदामा घर-आउने जाने भइरहेको हुन्छ । हाम्रो वैवाहिक जीवनमा अरु कुनै समस्या छैन । तर, एउटा समस्या छ । म अरु स्त्रीसँग लसपस गर्छु कि भनेर मेरी पत्नी धेरै शंका गर्छिन । कतिसम्म भने नयाँ-नयाँ नम्बर लिएर, फेसबुकमा फेक आईडी बनाएर मेरो जासुसी गर्छिन् ।
विवाहअघि जे जस्तो भए पनि, विवाहपछि कुनै परस्त्रीसँग मैले शारीरिक-मानसिक सम्बन्ध राखेको छैन । महिला मित्रचाहीँ बाल्यकाल देखिका छन्, २/३ जना । उनीहरुसँग कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी हुन्छ ।
म आफ्नो वैवाहिक जीवन सुखी र खुशी बनाउन हरदम प्रयास गरिरहेको हुन्छु । तैपनि सधैं उनको शंका गर्ने बानीले हैरान परेको छ । अरु कुनै कारणले हाम्रो झगडा हुँदैन । बस, शंकाले सधैं झगडाको बीउ रोप्छ ।
उनको चाहनाअनुरुप मैले आफ्ना सबै महिला मित्रहरुसँग दूरी बनाएको छु । तैपनि उनको शंका गर्ने बानी हटाउन सकिएन । कृपया उनको शंका गर्ने बानीलाई कसरी ठीक पार्ने होला ?
मानिसमा सामान्यतया दुई वटा कारणले शंका गर्ने बानीको विकास हुन्छ । पहिलो, आफ्नो मान्छेलाई धेरै माया गर्दा त्यो मानिसबिनाको जीव्ान कल्पना गर्न सकिँदैन । ‘यो मानिसबिना मेरो जीवन समस्यामा पर्छ’ भनेर कसैको मनमा गम्भीरतापूर्वक कल्पना गर्ने बानी पर्‍यो भने उसका बारेमा बढी सोधीखोजी शुरु हुन्छ । यो शंकाभन्दा बढी मायाको संकेत हो । माया नै भए पनि यस्तो खालको मायाले जीवनमा समस्या निम्त्याउने गर्छ । यसका लागि भिन्न किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को शंका वास्तविकतासँग धेरै नजिक हुन्छ । यसअघि कुनै व्यक्तिले पटक-पटक एकै खालको गलत काम गरेपछि त्यो मानिस शंकाको घेरामा आउँछ । फलस्वरुप उसले गल्ती नगर्दा पनि उसले शंकाको घेरामा पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।
तपाईंको प्रश्न केही अपूरो भए पनि तपाईंका कुराले ती दुवैतर्फ संकेत गर्छ । यही कारण मैले यहाँ दुवै किसिमका लक्षणलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेकी छु ।
प्रेमका कारण उब्जने शंका
प्रेम अन्धो हुन्छ । प्रेमले मानिसलाई केही स्वार्थी बनाउँछ । आफूले प्रेम गरेको मानिसले अरु कसैसँग सम्बन्ध नबढाओस्, मेरैअघि मात्र बसिदेओस्, जीवनभर मेरै लागि काम गरोस् र मेरैबारेमा सोचिदेओस् भन्ने सोच्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई कसैले ‘तिमी गलत गरिरहेकी छौ’ भनेर सम्झाउन खोज्यो भने उनीहरु यसलाई गलत मान्न तयार हुँदैनन् । उनीहरु यसलाई प्रेम ठान्छन् र ‘मैले हाम्रो भलाइका लागि यी काम गरिरहेको’ भन्ने ठान्छन् ।
यस्ता व्यक्तिहरुलाई ‘प्रेममा स्वार्थ हुनुहुँदैन, प्रेमले एक-अर्कालाई बाँध्ने होइन, स्वतन्त्रतामा रमाउनु दिनुपर्छ’ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । अपरिपक्व प्रेममा यस्ता समस्या आउने गर्छन् । तर, यस्ता मानिसलाई ‘समाजमा सबैसँग घुलमिल गर्नु हाम्रो बाध्यता भए पनि म तिमीसँगै प्रेम गर्छु र बाहिर जति मानिससँग संगत गरिरहेको छु, त्यो हाम्रो भविष्यकै लागि हो’ भन्ने बुझाउनुपर्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई सम्झाएर मात्र पनि पुग्दैन । उनीहरुलाई ती कुराहरुको प्रमाण पनि चाहिन्छ । यसका लागि केही घटनाबाट बुझाउनुपर्छ ।
यसका लागि महिलालाई सम्झाउन माइती पक्षका सम्बन्धहरुलाई उदाहरण दिएर कुरा बुझाउन सकिन्छ भने पुरुषहरुलाई सम्झाउन उसका निकट मित्रहरुसँगको सम्बन्ध कति महत्वपूर्ण छ भनेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विस्तारै प्रेमको ज्वरो पनि कम भएपछि यस्ता अनावश्यक शंका आफैं हटेर जान्छन् ।
गल्तीका कारण उब्जने शंका
कुनै व्यक्तिले एकै खालका काम गर्‍यो भने ऊ त्यस्तै खालको मान्छे हो भन्ने धारणा उब्जन्छ । यस्तो धारणा कसैमा बलियो भएर गएको अवस्थामा उसले ती काम नगर्दा पनि मानिसले विश्वास गर्दैनन् । मानौं कुनै व्यक्ति रक्सी खान बद्नाम छ भने उसले रक्सी छाडे पनि मानिसले तुरुन्तै विश्वास गर्दैनन् ।
कतिपयले ‘तत्काल उसले रक्सी छाडे पनि भविष्यमा फेरि खान्छ’ भन्ने धारणा पाल्छन् । यस्ता व्यक्तिले रक्सी छाडेको विश्वास दिलाउन वषौर्ं विभिन्न खालको परीक्षाबाट गुज्रनुपर्छ ।
तपाईंको प्रश्नले माथिका दुवै कुराको संकेत गरेको छ । तपाईंले विवाहअघि आफ्नै बालसखीहरुसँग कुनै न कुनै खालको नजिकको सम्बन्ध बढाएको हुनसक्छ । तपाईंको प्रश्नमा पनि यस किसिमका संकेत देखिएका छन् । यो कुरा तपाईंकी श्रीमतीलाई थाहा भएको र उनको खुशीका लागि ती महिला मित्रसँग दूरी बढाएको कुरा पनि तपाईंको प्रश्नमा देखिन्छ ।
शायद तपाईंले आफ्नो सम्बन्ध अरुसँग नभएको कुरा बुझाइरहनु भएको छ । तर, तपाईंकी श्रीमतीलाई अझै तपाईंमाथि पूर्ण विश्वास नभएका कारण फेक आईडी र अर्कै फोनमार्फत् तपाईंको कुरा परीक्षण गरिरहनु भएको छ ।
आजभोलि तपाईंले बाहिर सम्बन्ध राख्नु भएको छैन र बाहिर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईं यस्ता कुराबाट डराउनु पर्दैन । तपाईंकी श्रीमतीले विस्तारै तपाईंको दृढ निश्चय बुझेपछि विश्वास गरिहाल्नु हुन्छ ।
पहिले तपाईंबाट केही गलत कृयाकलाप भए पनि अहिले सही बाटोमा हिँड्ने निश्चय गर्नु भएको हो भने श्रीमतीको शंका विस्तारै दूर हुन्छ । बरु, अझै बढी माया पाउनु हुन्छ । कोही ठीक बाटोमा आउँछ भने उसको परिवारमा खुस्शीको सञ्चार शुरु हुन्छ र त्यसले घरको मूली बढी फाइदामा रहन्छ ।
मानौं तपाईं पहिले कुनै पनि गलत सम्बन्धमा हुनुहुन्नथ्यो । तपाईंका बालसखीहरु केवल तपाईंका साथी मात्र हुन् । विवाहपछि श्रीमतीको अत्यधिक शंका गर्ने बानीका कारण सबै साथीहरुसँग टाढा हुनु परेको हो भनेचाहिँ यो दुःखद् कुरा हो ।
यो बुँदा नम्बर एकमा भनिएजस्तो तपाईंकी श्रीमतीले तपाईंलाई गरेको अन्धो प्रेमको नतिजा हो । यसले तपाईंलाई केही पीडा दिइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि तपाईंले केही बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति समाजमा एक्लिएर बस्न सक्दैन । अन्धो मायाले समाजबाट एक्ल्याइदिन्छ । यस्तो वैवाहिक जीवनमा श्रीमान्ले आफ्नो घरपरिवारका मानिससँग टाढा बनाउने र श्रीमतीलाई माइतीबाट टाढा बनाइदिने अवस्था आउँछ ।
त्यसैले यो खतरनाक मायालाई भने चाँडोभन्दा चाँडो व्यावहारिक मायामा परिणत गर्नुपर्छ । यसका लागि बढीभन्दा बढी स्नेह गर्ने, उनलाई पनि सबैसँग घुलमिल गराएर हाम्रो मायाको कोही पनि दुश्मन नभएको बरु सहयोगी रहेको बुझाउने, कुनै गलत मानिस छ भने उनलाई देखाएरै ऊसँग सम्बन्ध तोड्ने र समाजमा मानिस कसरी मिलेर बसेका छन्, त्यो प्रमाणसहित देखाउने गर्नुपर्छ । यसका लागि भने तपाईंले मनोवैज्ञानिकको सहयोग लिने गर्नुपर्छ ।
सत्य कुरा के हो त्यो तपाईंलाई नै बढी थाहा छ, श्रीमतीको शंका अर्थात् ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ दूर गर्न तपाईंले नै केही बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ
Previous Postआफ्नो जन्म मितिबाट आफैले थाहा पाउनुस, तपाइको भाग्य कति बर्षदेखि चम्कन्छ ? Next Postहरेक महिलाले पुरुषलाई भन्न् नमिल्ने र पुरुषले सोध्न नमिल्ने यि सात कुरा